Valiny haingana: Maharitra hafiriana ny fahandroana steak pie avy amin'ireo mpivaro-kena? - Mahandro aho
Maharitra hafiriana ny fihinanana steak pie 2lb?
Maharitra hafiriana ny fahandroana steak pie 3lb?
Ahoana no fomba fahandroako steak pie 1lb?
Maharitra hafiriana ny hafanana pie ao anaty lafaoro?
Firy ny sakafo steak pie 2lb?
Firy ny olona mihinana steak pie 1lb?
Firy ny sakafo steak pie 3lb?
Ahoana no ahalalanao fa vita ny steak pie?
Mandra-pahoviana no hihinana pie steak ao anaty vata fampangatsiahana?
Azoko atao ve ny mahandro pie steak avy am-paty?
Hatraiza ny hafanana steak pie eo afovoany?
Ahoana no anaovanao pika steak lehibe?
Azoko atao ve ny manamboatra pie ary mahandro azy avy eo?
Fomba hafanana inona no tokony hatao amin'ny pie hena rehefa masaka?
Mandra-pahoviana ianao no manao pie?
Torolàlana momba ny famerenana hafanana - Esory amin'ny fonosana ary apetraho amin'ny lafaoro efa voafana ao amin'ny 180'c / Gas 4-5 mandritra ny 30-40 minitra. (Raha defrost mangatsiaka tanteraka alohan'ny haverina averina). Mety tsy hitovy ny lafaoro ataon'ny isam-batan'olona, ​​ataovy izay hahamafana ny fantsom-pandehanana alohan'ny hanompoana azy.
Afanaina hatramin'ny 180 ° C na gazy Marka 4 (amboary araka izany ny lafaoro ampian'ny mpankafy). Vahao ny mofomamy ary rakofana foil. Apetaho amin'ny lovia fandrendrehana. Afana mandritra ny 50 minitra eo ho eo.
Torolàlana momba ny fandrahoana sakafo Mofomamy ao anaty lafaoro efa nafanaina amin'ny 180C / GM4 mandritra ny 60-70 minitra. Mandrakotra foil mandritra ny 40 minitra voalohany.
Fampandrenesana lafaoro (Avy amin'ny Frozen): Ao anaty lafaoro alefa / lasantsy efa nohafanaina aloha: hafanana mandritra ny 50 minitra amin'ny maridrefy 180 ° C / lasantsy 6. Mpahandro lafaoro (Avy mangatsiaka): Ao anaty lafaoro aorina / hafanana entina mafana: hafanana mandritra ny 25-30 minitra amin'ny maripana 190 ° C / gazy 6 1/2.
MAHALALA IZAO: Mandra-pahoviana no mahandro nahandro amin'ny 250?
Afanaina mialoha ny hafanana ho 350 degre. Apetaho eo amin'ny takelaka mofomamy amin'ny foil na ny taratasy mofomamy ny pie, ny turnover, na ny mofomamy, ary rakofana moramora amin'ny foil. Ho an'ny pie 9-inch, hafanana mandritra ny 15-20 minitra. Ny pie 5-inch dia maharitra 12-15 minitra ary ny fihodinana dia 10-12 minitra eo ho eo.
Manompo: olona 4-6.
Manoro hevitra izahay fa ity pie ity dia mety ho an'ny olon-dehibe 3 (tsy mitovy ny filan'ny nofo).
Manoro hevitra izahay fa ity pie ity dia mety ho an'ny olon-dehibe 6-8 (miovaova ny filan'ny sakafo).
Torolàlana momba ny famerenanana Steak Pie
Soso-kevitra ambony - Rehefa miakatra ny volom-borona ary mivadika volontsôkôlà dia tokony ho vonona ny mofomamy fa alao antoka foana fa mipoaka ny pie mandritra ny alohan'ny fanompoana. Torolàlana momba ny famerenana hafanana - Esory amin'ny fonosana ary apetraho amin'ny lafaoro efa voafana ao amin'ny 180'c / Gas 4-5 mandritra ny 30-40 minitra.
Mandra-pahoviana ny pie hena ao anaty vata fampangatsiahana? Ny pie hena vao namboarina dia hitazona mandritra ny 3 ka hatramin'ny 5 andro ao anaty vata fampangatsiahana; vata fampangatsiahana rakotra foil aluminium na fonosana plastika. Azonao atao ve ny manala ny pie hena? Eny, hampangatsiaka: fonosina tsara amin'ny alimoola vita amin'ny alim-pito na plastika amin'ny vata fampangatsiahana plastika ny pie hena, na apetraho ao anaty kitapo fitehirizana mavesatra.
azo amboarina amin'ny mangatsiaka izy ireo, apetaho amin'ny lafaoro amin'ny hafanana ambany tokony ho 100 deg / lasantsy 2/3 mandritra ny 30 minitra na mandra-pahaleman'ny famenoana, avy eo atsangano ny hafanana ary endaso mandra-masaka ny pastry.
MAHALALA IZAO: Inona no fomba tsara indrindra handrahoana trondro?
74 degre C. 170 ka 175 degre F. 76 ka 79 degre C.
Tabilao momba ny mari-pana ao anaty kisoa: mari-pana fandrahoana Fahrenheit sy Celsius.
Temperature Core anatiny
Medium 140 hatramin'ny 145 degre F. 60 ka 63 degre C. foibe mavokely hatsatra
Vita tsara 160 degre F. sy ambony steak dia mitovy volontsôkôlà manerana
Torolàlana momba ny fandrahoana sakafo:
Afanaina mialoha ny lafaoro hatramin'ny 180 ºC / 350ºF / Marka gazy 4. Apetaho amin'ny lovia misy lafaoro ny pie ary apetaho amin'ny foil mba hampijanonana ny tampon'ny pie tsy ho may. Andraho ao anaty lafaoro mandritra ny 25-30 minitra alohan'ny hanesorana foil ary averina ao anaty lafaoro mandritra ny 5 minitra fanampiny. Alao antoka fa mafana ny fantsom-pie.
Azonao atao ny manomana ny pie mialoha ary mitazona azy ao anaty vata fampangatsiahana, vonona ny hisolelaka sy hanendasa - avelao 10 minitra fanampiny ao anaty lafaoro. Na mety aleonao ihany ny manao ny mofomamy mialoha - fonosina tsara ary tazomy ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny andro vitsivitsy, na ao anaty vata fampangatsiahana mandritra ny roa herinandro.
Ny mahandro ny hena amin'ny ambin'ny làlana dia midika fa mila mahandro azy soa aman-tsara isika fa tsy manadino azy loatra. Atsofohy ao anaty afovoan'ny pie ilay savony azo antoka lafaoro an'ny ChefAlarm ary apetaho amin'ny 150 ° F (66 ° C) ny fanairana avo. Rehefa maneno ny ChefAlarm dia hamarino ny mari-pana amin'ny Thermapen Mk4 anao.
Hamafisin'ny microwave ny pie mandritra ny 2 ka hatramin'ny 3 minitra arakaraka ny herin'ny microwave anao; Apetraho ao anaty fatana ny pie ary andrahoy mandritra ny 3 minitra hafa mba hiafara amin'ny crusty crust.
MAHALALA IZAO: Ahoana no ahalalanao raha masaka Salmon misy setroka?
Сooking any ivelany 0
Atsofohy aloha ny giro amin'ny antonony (raha mampiasa charcoal grill ianao dia arina
Ny Torkia Burgers dia mifanaraka amin'ny sokajy akoho amam-borona ary noho izany dia mila masaka feno
Mandra-pahoviana ianao no mahandro trondro amin'ny afo? Asio tombo-kase ny kitapo foil,
Ho an'ny steak sirloin ambony salantsalany tsy fahita firy, manendy mandritra ny 9-12 minitra ho an'ny 1-inch
Mandra-pahoviana ianao no mahandro hena ao ambanin'ny makarakara? Afanaina ny giro ho azy
Alohan'ny handrahoanao voalohany amin'ny makarakara vy, dia tsy maintsy manasa ianao
Mbola maharitra mafana kokoa noho ny rano mikraoba ve ny rano andrahoina?
Afaka mahandro amin'ny amboara Yeti ve ianao?
Miteraka fiparitahan'ny cookies ve ny vovo-mofo?
Tokony mahandro atody amin'ny hafanana ambany na avo ve ianao?